Ilaalacha: Akka itti Itoophiyaan Gamtaa Afrikaa gatii dhabsiisaa jirtu! | Kichuu
Ilaalacha: Akka itti Itoophiyaan Gamtaa Afrikaa gatii dhabsiisaa jirtu!
Ilaalacha: Akka itti Itoophiyaan Gamtaa Afrikaa gatii dhabsiisaa jirtu
Sadaasa 29, 2020
Itoophiyaan biyyoota adda durummaan Gamtaan Afrikaa akka hundaa’u gumaachan keessa jirti, gochi ishii miilanaa garuu qajeeltoowwan hundeeffama gamtaa kanaa kan cabsudha jedha xiinxalaan dhimmoota Itoophiyaa Aleks dii Waal.
Hogganoonni duraanii biyyoota Afrikaa sadi lolli Tigraay mariin furmaata akka argatu jaarsummaaf Finfinnee galanii osoo hin turiin, MM Abiy ‘tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu marsaa xumuraa’ akka eegalamu ajaja dabarsan. Kuni yaalii Gamtaa Afrikaaf ifannaa guddaadha.
Pireezidantoonni duraanii kan Laayibeeriyaa Eelan Joonsan Sarleef, kan Mozaambiik Yo’aakiim Chisaanoo fi kan Afrikaa Kibbaa Kigaaleemaa Mootilaantee Jimaata MM Abiy Ahimad waliin wal arganii mari’ataniiru.
Dura taa’aa ammaa Gamtaa Afrikaa kan ta’an pireezidantii Afrikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaa irraa ergama jaarsummaa fudhatanii Finfinnee kan dhufan hogganoonni kunneen, Itoophiyaan tarkaanfii waraanaa fudhataa turte akka hin dhaabne itti himame. Hogganoonni kunneen bakka buutota TPLF kan mootummaan Itoophiyaa ‘yakkamtoota’ jedhuun arguu akka hin dadneenyellee itti himameera.
MM Abiy torbe darbe keessa keewwata chaartarii UN eeruun mootummaan federaalaa Itoophiyaa dirqama olaantummaa seeraa kabachiisuutti jira jedhanii jiddu seentummaa qaama alaa kamiyyuu akka hin fudhanne beeksisanii turan.
Haa ta’u malee ogeessi seeraa lammii Naayijeeriyaa Chiidii Odinkaaluu Itoophiyaan chaartarii kana eeruun waraana hammeessaa jirti jechuun morma. Akka inni jedhutti lolli kun sababa Eertiraa hirmaachisee fi baqattoonni gara Sudaan qaxxaamuraa jiraniif, tarkaanfii seera kabachiisuu biyya keessaa ta’uun hafee idil-addunyaawaa ta’eera. Biyyootni mirga jiddu seentummaa ofirraa dhorkuutiin biyya keessatti yakka raawwatanii adabbii ooluu akka hin dandeenyes UN qajeelfama baase qaba jedha.
Sodaa yakka Waraanaa
MM Abiy jaarsummaa hogganoota Afrikaa kana diduun, marii nagaa diduu qofa osoo hin taane, qajeeltoo Gamtaan Afrikaa ittiin hundeeffame gaaffii keessa galchuu ta’a.
Seera AU kan Itoophiyaan bara 2002 mallatteessite keewwata 4(g) jalatti – “dhimma biyya keessaa biyya miseensa gamtichaa jidduu seenuun dhorkaa” ta’uun tumameera.
Haa ta’u malee achuma keewwata 4(h) jalatti ammoo wayita gochoonni akka yakka waraanaa, duguuggaa sanyii fi yakki dhala namaa irratti raawwatamu mudatan AUn jidduu seenuu ni danda’a jedha.
Dirqamni jidduu seenuu bara 1994 duguuggaa sanyii Ruwaandaa leessatti raawwateen booda tumame.
Ka’umsa akkamiin gochi akkasii akka irra hin deebine ittisuu dandeenya jedhu kan Itoophiyaan jabeessitee deeggaraa turteen yaadichi wixinamee kan dhiyaate.
Mootummaan Itoophiyaa dhaaba naannoo Tigraay bulchu TPLF yakkoota jajjaboo raawwachuun himata. Uggurri maloota qunnamtiirra jiru wayita kaafaame ragaaleen gama lamaaninuu yakki waraanaa raawwatamuu fi dhiisuu mul’isa ifa bahu.
Loltoonni Eertiraa daangaa qaxxaamuruun buufata baqattootaa UN kan Tigraay jirutti marsanii baqattoota Eertiraa to’ataniiru kan jedhu gabaasaaleen jiru, kuni mirkanoofnaan waliigaltee baqattootaa UN kan diigudha. Milkaa’ina dipiloomasii Itoophiyaa. Dhaabbanni Tokkummaa Afrikaa (OAU) bara 1963 teessoo isaa Finfinnee godhatee yoo hundaa’u, birmadummaa biyyoonni Afrikaa reefu kolonii irraa argatan jabeessuuf ture.
Teessoo OAU Finfinnee akka ta’u murteessisuun mooticha Hayilasillaaseef injifannoo dipiloomasii guddaa ture. OAU’n brmadummaa biyyoota Afrikaaf gumaachus garee ykn kilaba diktaataroota jedhamuun qeeqamaa ture. Booda bara 2002 ergama jabaa nagaa fi diimokiraasii babal’isuu jedhu qabachuun gara Gamtaa Afrikaa ykn AU ta’ee hundeeffaame. Ergasii heera mootummaan ala aangoo walirraa fuudhuun akka hin jiraanne, walitti bu’iinsi fi lolli gara garaa karaa nagaa akka furamu yaalii taasisaa ture.
AU’n bu’aa inni buuse. MM Abiy mataan isaanii bara darbe rakkoo biyya Sudaan keessatti humna waraanaa fi gareelee diimokiraasii leellisan jiddu ture furuuf irratti hirmaatee ture.
Ceehumsi gara diimokiraasii Sudaan kun gaaddisa Gamtaa Afrikaa jalatti kan raawwate ture.
Haa ta’u malee AU’n dhaabbata jabaa miti. Rakkoo hanqina bajataas waan qabuuf waan yaade hojiitti hiikuuf ni rakkata.
Maddi:- BBC NEWS Afaan Oromoo